“नेपाल भन्दा २२ गुणा ठुलो भारतले लिपुलेकमा किन लोभ गर्दैछ ? हेर्नुहोस यस्तो छ खास कारण, डा. दिल बहादुर क्षेत्रीको यस्तो आक्रोश” is locked नेपाल भन्दा २२ गुणा ठुलो भारतले लिपुलेकमा किन लोभ गर्दैछ ? हेर्नुहोस यस्तो छ खास कारण, डा. दिल बहादुर क्षेत्रीको यस्तो आक्रोश – Samacharpati Samacharpati “नेपाल भन्दा २२ गुणा ठुलो भारतले लिपुलेकमा किन लोभ गर्दैछ ? हेर्नुहोस यस्तो छ खास कारण, डा. दिल बहादुर क्षेत्रीको यस्तो आक्रोश” is locked नेपाल भन्दा २२ गुणा ठुलो भारतले लिपुलेकमा किन लोभ गर्दैछ ? हेर्नुहोस यस्तो छ खास कारण, डा. दिल बहादुर क्षेत्रीको यस्तो आक्रोश – Samacharpati